အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Htanaungg - ဝီကီပီးဒီးယား
၁ ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Zin Win Hlaing !
၂ GA nomination
၃ Your opinion
၄ Film titles
ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Zin Win Hlaing !ပြင်ဆင်
--Welcome-Bot (ဆွေးနွေး) ၀၈:၁၁၊ ၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကို ဆောင်းပါးကောင်း စာရင်းသွင်းထားပါတယ်။ အချိန်ရရင် review လုပ်ပေးပါအုံး။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၃:၄၃၊ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
Would you mind giving some of your opinions in ဆွေးနွေးချက်:ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်? Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၁၅:၅၀၊ ၄ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)
Do you know how to translate or transliterate certain film titles that were retained from English? I need help on this, so I'm asking multiple users. Thank you. 2600:1700:53F0:AD70:7943:AFDB:85F3:8F2F ၀၃:၃၈၊ ၁၄ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)
ကျွန်တော် ကိုရီးယားသမ္မတတွေအကြောင်းကို ဘာသာပြန်မလို့ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ သမ္မတ က သမ္မတများစာရင်းမှာ သမ္မတနာမည်တွေကို မြန်မာဘာသာလေး ပြန်ပေးပါဦးဗျ။ ကျွန်တော်ကကျတော့ ကိုရီးယားနာမည်တွေကို သိပ်ဘာသာမပြန်တတ်လို့ဗျ။ ဘာသာပြန်ပြီးတော့မှ နာမည်တွေက လွဲနေမှာစိုးလို့ပါ။ ကျေးဇူးပါ။ Kantabon (ဆွေးနွေး) ၁၂:၁၀၊ ၁၄ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)
@Kantabon: ဆရာအဆင်ပြေသလိုသုံးလို့ရအောင် ဒီမှာပဲ အင်္ဂလိပ်နဲ့ မြန်မာတွဲပြလိုက်ပါမယ်ဗျ။ နာမည်တချို့က အခုခေတ်သုံး romanization နဲ့ မကိုက်လို့ ကိုရီးယားလိုရေးထားတာကိုပဲကြည့်ပြီး အသံထွက်ကို အနီးစပ်ဆုံး မြန်မာလိုရေးထားပါတယ်ဗျ။ (Yoon Seok Yeol ကိုပါ လိုရမယ်ရ တစ်ခါတည်းထည့်ထားပါတယ်ဗျ။) ~ ထနောင်း (🔔 • 📝) ၁၂:၃၈၊ ၁၄ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)
Rhee Syung Man > ရီဆွန်းမန်း
Ho Chong (=Heo Jeong) > ဟောဂျောင်
Kwak Sang Hoon > ဂွါ့ဆန်ဟွန်း
Paik Nak Chun (=Baek Nak Joon) > ဘဲ့နာ့ဂျွန်း
Yun Po Sun > ယွန်းဘိုဆွန်း
Park Jung Hee > ဘတ်ဂျောင်ဟီး
Choi Kyu Hah > ချွဲဂယူဟာ
Park Choong Hoon > ဘတ်ချွန်းဟွန်း
Chun Doo Hwan > ဂျောန်းဒူဟွမ်း
Roh Tae Woo > နိုထယ်ဝူ
Kim Young Sam > ဂင်ယောင်ဆမ်
Kim Dae Jung > ဂင်ဒယ်ဂျွန်
Roh Moo Hyun > နိုမူဟျွန်း
Lee Myung Bak > လီမြောင်ဘာ့
Park Geun Hye > ဘတ်ဂွန်းဟဲ
Hwang Kyo Ahn > ဟွမ်ဂယိုအန်း
Moon Jae In > မွန်းဂျယ်အင်း
Yoon Suk Yeol > ယွန်းဆော့ယော
​ကျေးဇူးပါ။Kantabon (ဆွေးနွေး) ၁၅:၂၅၊ ၁၄ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Htanaungg&oldid=737700" မှ ရယူရန်
၁၄ မတ် ၂၀၂၂၊ ၁၅:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ မတ် ၂၀၂၂၊ ၁၅:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။